नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । देश नै रेमिटेन्सले धानेको छ । यस्तो लाग्छ अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुनै घरको सदस्य नहोलान् । नेपाली युवा कामका लागि विदेशिन म्यानपावरमा चक्कर लगाइरहेका हुन्छन् । भविष्य राम्रो बनाउने सपना बोकर बेरोजगार युवा विदेशिन चाहान्छन् । विदेश जानुअघि केही सवालमा जानकारी राखिएन भने जीवनलाई धेरै कुराले असर पार्न सक्दछ । वैदेशिक रोजगारको यात्रालाई सुरक्षित र सुखद बनाउनका लागि श्रमजीवि कामदार आफैं सचेत बन्नु आवश्यक छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जान चाहाने विभिन्न दलालको फन्दामा परेर ठगीने जोखिम उत्तिक्कै रहन्छ । भने बमोजिमका काम, तलब तथा सेवासुविधा नपाउँने सम्भावना पनि रहँने हुदाँ वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व धेरै कुरामा विचार पुर्याउनु पर्दछ । श्रम स्वीकृतिका लागि पेश गरिने कागजात झुटो भएमा यस्ता विभिन्न खालका समस्याहरु सिर्जना हुन सक्छन् । कतिपय नीति नियम बारे जानकारी नहुँदा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई विभिन्न खालका समस्याहरु आउन सक्छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि जान चाहानेले निम्न कुराहरुमा ध्यान दिएमा वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित हुनुका साथै काम, उचित पारिश्रमिक लगायतमा ढुक्क हुन सकिन्छ ।
सीप सिकेर मात्र विदेश जाने :
सीप भनेको मानव जीवनलाई नभई नहुने कला हो । कोही मानिस बोलेर, लेखेर बाँचिरहेका हुन्छन् त कोही मानिस आफ्नो सिप प्रयोग गरेर आर्थिक आम्दानी लिने गर्दछन् र त्यसैबाट जीविकोपार्जन गर्ने गर्दछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि पनि आफू कुन कामका लागि जाने हो सो सम्बन्धि सिप सिकेर जानुपर्दछ । ‘जे पायो त्यही कामको हामफाल्न’ हुदैन । पछि दुःख पाउँनुभन्दा पहिल्यै सोचर निर्णय लिनु जीवनका लागि फाइदा हुने भएकाले विदेशमा गर्नुपर्ने कामका विषयमा पूर्ण जानकार हुनुका साथै सिप हासिल गरेको खण्डमा वैदेशिक रोजगारी फलदायी हुन सक्छन् । कुनै पनि सिप नभई वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कस्तो खालको समस्या झेल्नुपर्ला ? हामीले धेरै पटक सुनेका पनि छौं की कम्पनिमा काम गर्न नसकेर कामदारहरु अर्को कम्पनिमा भागेको अथवा कम्पनिमा विभिन्न प्रकारका यातनाहरु पाएको । हातमा सिप भएकाहरुलाई आफ्नो शिप प्रयोग गरेर खानका लागि कसैले पनि रोक्न सक्दैन । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु जतिले पनि दुःख पाएका छन् उनीहरु सिप नभएका कारण नै बढी दुःख पाएको पाइएको छ । आफूसंग सिप नभएपनि आफूले राम्रोसंग कुरा राख्न पनि सक्ने अवस्था हुदैन । यसर्थ, विदेश जानुभन्दा पहिले आफू रुपमा गर्नुपर्ने कामबारे दक्ष भएर नै जानुपर्छ ।
दलालको भर नपरौं, आधिकारिक रुपमा जाऔं :
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा विचार गर्नुपर्ने मध्ये एउटा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको दलालबाट बच्नु पनि हो । गाउँघरमा दलालहरु यति पैसा ठिक पार्नु यस्तो काममा लगाई दिन्छु भन्दै आश्वासन बाँड्दै आउँनछन्। यसरी घरघरै आउने दलाल अर्थात एजेन्टको विश्वास गर्नुहुन्न । उनीहरुको भनाई विश्वास गरेर पैसा बुझाएका धेरै फसिरहेको कथा त बारम्बार हामीले सुनिरहेकै छौं । कानूनी रुपमा ठीक तरिकाले वैदेशिक रोजगारीका लागि गइयो भने भाोलिका दिनमा कुनै समस्या परेमा पनि समाधानका लागि सहज हुन्छ । अन्यथा सुख पाउने आशामा हिडेको यात्रीको गन्तव्य नै हराउन सक्छ । सरकारले अनुमति दिएको म्यानपावर कम्पनिबाट मात्रै हामी विदेश जानुपर्दछ । हाम्रो वरिपरि विभिन्न ठगहरु विदेश पठाइदिन्छु भन्दै घुमिरहेका हुन्छन् । कोही दलाल, कन्सल्टेन्सी फर्म, ट्राभल एजेन्सी, मनी ट्रान्सफर चेन्जर, संस्था कसैलाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अधिकार छैन । यी कुनैबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठगिने सम्भावना हुँदा बेलैमा सचेत बन्नु राम्रो हुन्छ ।
विदेशमा पठाउँन आधिकारिक रुपमा म्यानपावर कम्पनीले काम गर्दछन् । तर म्यानपावरले पनि नीति नियमलाई ख्याल नगरी विदेश जानेबाट धेरै नै रकम असुल्ने गरेका छन् । म्यानपावर कम्पनि पनि कतै गैर कानूनी रुपमा चलिरहेका त छैनन् ? सरकारले अनुमति दिएको छ वा छैन, कतिको विश्वसनीय कम्पनि हो सो बारेमा प्रसस्त जानकारी लिनुपर्छ ।
कतै म्यानपावरको काम कारवाही रोक्का भएको छ की ? कुनै कारवाहीमा पो छ की चासो राख्नुपर्दछ । म्यानपावरका विषयमा हामीले वैदेशिक रोजगार विभागबाट जानकारी लिन सक्छौं । अचेल विभागले आफ्नो वेभसाइटमा पनि म्यानपावरको विवरण राखेकाले ती म्यानपावरका बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ । यसका साथै व्यक्तिगत प्रयासबाट भिसा प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले नेपाली दूतावासबाट प्रमाणित सक्कल कागजातसहित श्रम स्वीकृति लिन सकिन्छ । तर कुन संस्था वा व्यक्तिमार्फत जाने हो भन्ने प्रसस्त ज्ञान भने लिनु पर्दछ ।
तलब तथा सेवा सुविधाबारे बुझौं :
विदेशमा रोजगारीबाट यति र उति कमाई हुन्छ भनेर भएको भन्दा पनि बढी नै गफ दिने एजेन्ट, म्यानपावर कम्पनि जताततै भेटिन्छ । यस्ताको कुरामा विश्वास गरेर आफ्नो भविष्य नै धरापमा पर्ने खालका कुनै पनि निर्णय हामीले लिनुहुन्न । ‘हतपतमा गरिएको काम पछि लतपत’ हुनसक्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनुपर्दछ । यसमा हामीले जाँदा लाग्ने खर्च देखि त्यहाँ पुगेर काम गरेबापत पाइने तलब, सेवा सुविधा, आफूले अन्य सेवाका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क, खाना तथा आवासको व्यवस्था, काम गर्नुपर्ने अवधि, ओभर टाइम काम गरेको हकमा पाइने सुविधा लगायत यावत प्रश्नको प्रष्ट जवाफ बोकेर मात्र विदेश जानु पर्दछ । यसका साथै म्यानपावर कम्पनीले विदेश पठाउन पासपोर्ट माग गरेमा कामका लागि कति अवधिभित्र र लागतमा पठाउने भन्ने यकिन गरेर भपाई गरेर मात्रै सक्कल पासपोर्ट बुझाउनु पर्दछ । विदेश जान चाहानेले म्यान पावर कम्पनिलाई पैसा बुझाउँदा आफ्नो नाममा भिसा आएर विदेश जाने निश्चित भएपछिमात्र म्यानपावर कम्पनीको बैंक खातामा वा प्रधान कार्यालयमा मात्र रकम बुझाउनु पर्दछ ।
तोकिएभन्दा बढी रकम हामीले दिनुहुन्न । पूर्व स्वीकृति अनुसार विज्ञापनमा उल्लेख भएभन्दा बढी रकम कसैलाई पनि दिनु हुदैन । सबै बारेमा प्रष्ट भएपछि मात्र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । यसरी गरिएको सम्झौताको एकप्रति आफूसंग राख्नुपदर्छ । विदेशमा काम गर्न जान पक्का पनि सजिलो छैन । त्यसैले आफू जान लागेको देशको बारेमा राम्रो जानकारी राख्नु आवश्यक छ । त्यो देशको भाषा, संस्कृति, रहनसहन, चालचलन, रीतिरिवाज र कानूनबारे साथीभाइ र अग्रजसँग जानकारी लिनुस् । त्यहाँ पुगेर फर्किएकाहरु र त्यहाँ रहेकाहरुबाट यस्ता जानकारी सजिलै पाइन्छ ।
आफू जाने मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासको सम्पर्क ठेगाना, अन्य कामदारलाई सघाउने र सहयोग गर्ने संघसंस्थाहरुको फोन र फ्याक्स नम्बर डायरीमा टिपेर साथैमा राख्नुपर्छ । समस्या परेका बेला त्यसले निकै सहयोग पुग्नेछ ।
श्रम, भिसा र पासपोर्टबारे जानकार रहौं :
वैदेशिक रोजगारीमा जान व्यक्तिगत र संस्थागत गरी दुई किसिमका श्रम अनुमति जारी गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत ताहचलस्थित कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति पाउन सकिन्छ ।
पहिलेको श्रम स्वीकृति म्याद नाघेको वा नयाँ देश वा कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारमा पुनः जाँदा अनिवार्य रुपले नवीकरण गराउनुपर्छ । करार अवधि सकिएपछि पनि स्वीकृति बिना गैरकानूनी तरिकाबाट भिसाको म्यादभन्दा बढी समय बस्नु हुन्न ।
त्यसो गर्दा सम्बन्धित देशको कानूनअनुसार कारवाही हुन सक्छ । आफ्नो राहदानीको म्याद समयमै नवीकरण गर्नुपर्छ । जानुअघि श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । श्रम स्वीकृति नलिए तपाईंलाई दलालहरुले भारतीय विमानस्थलहरुबाट उडाउन सक्छन् । त्यसैले यी विषयमा सचेत रहनुपर्छ ।
बीमा गराउनुपर्दछ :
विदेश जानुअघि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्दछ । सरकारले तोकेको होलोग्राम भएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र लिन बिर्सनु हुन्न । विदेशबाट स्वास्थ्य परीक्षणमा फेल भएर फर्किनु परेमा यसले क्षतिपूर्ति माग्न आधार प्रदान गर्छ ।
सरकारले तोकेको बीमा कम्पनीमा करार अवधिअनुसार जीवन बीमा गराउनुपर्दछ । बीमाका लागि रकम बुझाएर रसिद लिनुपर्दछ र यो सुरक्षित राख्नुपर्दछ । बीमाको रकम नतिरी श्रम स्वीकृति पाइँदैन । बीमा शुल्क दलाललाई नबुझाउनुहोला, बीमा कम्पनीमै गएर रकम आफैंले बुझाउनु पर्दछ ।
अभिमुखीकरण लिने विदेश जानुअघि अभिमुखीकरण लिनु आवश्यक छ । यसले तपाईंलाई विदेशमा पर्ने समस्याहरुसँग जुध्न सहज गराउँछ ।
सरकारले तोकेको संस्थामा अनिवार्य रुपमा दुईदिने अभिमुखीकरण र जाने मुलुकको श्रम कानूनसम्बन्धी जानकारी लिनुपर्छ ।
अभिमुखीकरण तालिमबाट आफू जाने देशको भौगोलिक अवस्था, हावापानी, ट्राफिक नियम, श्रमसम्बन्धी सामान्य कानूनी प्रावधानलगायत विषयमा पर्याप्त जानकारी हुन्छ । तपाईंले कमाएको पैसा वैधानिक रुपमा नेपाल पठाउने विधिबारे पनि जानकारी लिनुपर्छ ।
कागजातको सुरक्षामा ध्यान :
वैदेशिक रोजगारीमा जान विदेश प्रस्थान गर्नुअघि आफूले प्राप्त गरेका रोजगारसम्बद्ध सबै कागजातहरुको प्रतिलिपी १र१ थान आफ्नो घरमा सुरक्षित साथ राख्नुपर्छ । आफ्नो साथमा लिएर जानुपर्ने सबै कागजातपत्र रुजु गर्नुस् । किनकि, अध्यागमनको प्रस्थान कक्षमा वा विदेश पुगेर कागज नभएर समस्या झेल्नुपर्ने हुनसक्छ । कागजात कानूनी हतियार पनि हो । त्यसैले यसलाई परिवार र आफ्नो साथमा रहने सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । विदेश जाँदा प्रतिबन्धित वस्तुहरु बोक्नु हुन्न । विमानस्थल र विदेशमा पक्राउ पर्ने सम्भावना हुन्छ । के–के वस्तुहरु प्रतिबन्धित छन् भन्नेबारेमा पनि हामी जानकार हुनुपर्दछ ।
विदेशी मार्गबाट नजाने :
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्न सक्रियले विभिन्न बहानामा भारतीयसहित विदेशी विमानस्थलबाट लैजाने प्रलोभन देखाउन सक्छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर जानु पर्दछ । अन्यथा ठगिने सम्भावना अधिक हुन्छ । श्रम स्वीकृतिको निस्सा प्राप्त नहुँदै हवाई टिकट पनि खरीद गर्नु हुदैन । अन्य देशको विभिन्न बाटो प्रयोग गरी रोजगारीका लागि विदेश जानु हुदैन ।
यदि कसैले ललाई–फकाई लैजाँदै छ भने स्थानीय प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्छ । लुकीछिपी जाँदा ठगिने,कानूनी कारवाही हुने, अलपत्र पर्ने, दुर्घटना हुने, सम्झौताबमोजिम काम नपाउने, उद्धार पाउन कठिन हुने र कल्याणकारी कोष, बीमा कम्पनीबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा प्राप्त नहुने अवस्था आउँछ ।
पूर्वसूचनाको तयारी गर्ने :
विदेशमा पुगेर काम गर्दाको समयमा आफू ठगिए वा वैदेशिक रोजगारीबारे कुनै समस्या भएर सरकारलाई जानकारी दिन सकिन्छ । सरकारको सहयोग चाहिएको हो भने अब सीधै सरकारको टोल फ्री नम्बर १६६००१०९९९९ मा कल गर्न सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै गुनासा सुन्न वैदेशिक रोजगार विभागले टोल फ्री नम्बर सञ्चालन गरेको छ ।
यस्तै, विभागको हटलाइन नम्बर ००९७७–१–४११२३५० मा टेलिफोन गरेर गुनासो टिपाउन र आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको टोल फ्री नम्बर १६६००१५०००५ मा पनि आफ्ना समस्या राख्न सकिन्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले विदेश पठाइदिन्छु भनेर रकम मागेमा तुरुन्त नजिकको स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचना दिनुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीको नाम, ठेगाना परिवर्तन भएका कारण सम्पर्क गर्न नसकिए विभागमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने वैदेशिक रोजगारीका सूचनाको आधिकारिकता बुझ्नुपरेमा विभाग वा बोर्डमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । हामी आफू विश्वस्त नभई कुनै पनि कुराको निर्णय गर्नुहुन्न । एउटा सानो गल्तीले भोलीका दिनमा भविष्य नै जोखिममा पर्न सक्छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्दछ ।